သစ္စာအလင်း: ပြာသိုလပြည့် - ရှင်တစ်ထောင်အခါတော်နေ့
လပြည့်နေ့တိုင်း လပြည့်နေ့များအကြောင်း ရေးသားဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ယခု ၃၀.၁၂. ၂၀၀၉ မှာ ကျရောက်ခဲ့တဲ့ ရှင်တစ်ထောင် အခါတော်နေ့ (ပြာသိုလပြည့်နေ့) မှာတော့ ကျွန်မဟာ စာရေးသားရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။
၂၄.၁၂. ၂၀၀၉ မှ ၂၉.၁၂. ၂၀၀၉ အထိ ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ယောဂီဟောင်း မွန်းမံ အထူးတရားစခန်း ကို မှော်ဘီမြို့၊ စန္ဒကူးမြိုင် သာသနာ့ရိပ်သာ မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကျွန်မသည်လည်း မကြာခင် ကမှ ရဟန်းခံ ခဲ့တဲ့ သားရဟန်း ( အရှင် အဂ္ဂဓမ္မ ) နဲ့အတူ ၅ရက်တာ ဝင်ရောက်အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
စိမ်းစို လှပ ၊ ငြိမ်းအေးလှတဲ့ စန္ဒကူးမြိုင်ရိပ်သာ လေးကို တည်ထောင်ဆောက်လုပ် ခဲ့ ကာ ဆရာတော်များကို တရားစခန်းအဖြစ် အသုံးပြုတရားပြသဘို့ ရည်ရွယ်လှူဒါန်း ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းဒကာ ကတော့ ဒေါက်တာ ဦးဖေဉာဏ်၊ ဇနီး ဒေါ်လှကြည် နဲ့ သားမောင်သီလ တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယောဂီဟောင်းတွေကို ငြိမ်းအေးတဲ့နေရာမှာ သေသေချာချာ သင်ကြားပြသပေးလိုတဲ့ ဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ ဆန္ဒ ကိုလည်း ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယောဂီ များလည်း တောတောင်အရိပ်ရဲ့ တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းမှုက ကျေးဇူးပြုလို့ တရားအသိ တိုးတက်ကြပါတယ်။ ဝမ်းမြောက်သာဓုခေါ်စရာပါပဲ။
စခန်းပွဲ ပြီးတဲ့ ညနေ မှာ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း က မိုးညှင်းသိင်္ဂီကျောင်းကို ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ဆရာတော် ဘုရား နဲ့ တပည့် ဒါယကာ ဒါယကာ မများ စုပေါင်းပြီး လှူဒါန်းကြမဲ့ ဆွမ်းလောင်း အလှူ ပွဲ ကြီးတစ်ခု ကိုထပ်မံ ဆင်နွှဲဘို့ရာ ကြုံရ ပြန်ပါတယ်။
နေရာကတော့ ဟင်္သာတ မြို့ ၊ညောင်ပင်ရပ်က နွေသံဃာ့ဒါန ဆွမ်းလောင်း အသင်း မှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်၊ ပြာသိုလပြည့်တိုင်း ၊ ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး က ထာဝရ ဆွမ်းပဒေသာပင် စိုက်ပြီး လောင်းလှူခဲ့ တာ အခု( ပြာသိုလပြည့်နေ့ ) ဟာ တတိယ အကြိမ် မြောက်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ ည ၈-နာရီ ကားထွက် ခါနီး ဆဲဆဲမှာ မမျှော်လင့် ပဲ ပိုင်းလော့ ဆရာတော် ဘုရား ကိုယ်တိုင် လိုက်ပါ လောင်းလှူ မှာ သိရလို့ အားလုံး ပဲ ဝမ်းမြောက် စွာ ခရီးဆက်ကြရပါတယ်။
ကျွန်မ ကတော့ကားစထွက်တဲ့ အချိန်မှာ ထွက်ပြူစ လပြည့်ဝန်းကြီး ကို ကြည့်ပြီး ဥရုဝေလတော က ရသေ့ညီနောင်၊ ရှင်တစ်ထောင်ကို စတင်သတိရ လိုက်မိပါတယ်။မနက်ဖြန် လောင်းလှူရမဲ့ သံဃာ ကတော့ ၃၆၀၀ တောင်ရှိကြောင်းသတင်း စကားကြား သိရ တော့ သံဃာ တန်းရှည်ကြီး ဆွမ်းခံကြွလာ မှာ မြင်ယောင်ပြီး ဆက်စပ် တွေးတောကာ ကြံသိစိတ်ခန္ဓာ ငါးပါး ဖြင့် ခန္ဓာအိမ် ဖွဲ့ ဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ( ဆွမ်းလောင်းအသင်းကို ပိုစ့်သပ်သပ်ရေးပါအုံးမည်။)
မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ခုနှစ် ပထမဝါကျွတ်ပြီး မှာ ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရား သခင် သည် ၊ ရသေ့တစ်ထောင်ကို ချွတ်ဘို့အတွက် ဥရုဝေလတော သို့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့မှာရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ ပြာသိုလပြည့်နေ့အထိ နှစ်လတာမျှ နေထိုင်သီတင်းသုံးပြီး ရသေ့များကိုစည်းရုံးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ အချိ်န်က ဥရုဝေလ တော ထဲမှာ
အစ်ကိုကြီး ဥရုဝေလ ကဿပခေါင်းဆောင်တဲ့ ရသေ့ ၅၀၀၊
အစ်ကိုလတ် နဒီ ကဿပ ခေါင်းဆောင်တဲ့ ရသေ့ ၃၀၀၊
ညီငယ် ဂယာကဿပခေါင်းဆောင်တဲ့ ရသေ့ ၂၀၀ တို့ သုံးနေရာခွဲပြီး နေထိုင်ကြပါတယ်။
ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားက ဥရုဝေလကဿပ ထံ နေခွင့်တောင်းလေရာ နဂါးကြီးရှိတဲ့ မီးတင်းကုတ်ကို နေခွင့်ပေးပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင် က နဂါးကြီးကိုတန်ခိုးတော်ဖြင့်နှိမ်နင်းပြလေရာ ဥရုဝေလကဿပ နှင့် ရသေ့များ အထင်ကြီး သွားကြပါတယ်။
ရသေ့များအားလုံး ကိလေသာခေါင်းပါး ဘို့ အတွက် မီးလှုံခြင်း ၊ ရေငုတ်ခြင်း စတဲ့ ပဉ္စာတပ အကျင့်များများကို ကျင့်ကြံနေကြပါတယ်။ ကျင့်ကြံ ပုံမှာ ဆီးနှင်းတွေ ဝေကျပြီး ခိုက်ခိုက်တုန် ချမ်းအေးသော ပြာသိုလ အတွင်း သတ်မှတ်ရက် ၈ည တွင် နေရဉ္စရာ မြစ်အတွင်းသို့ သက်ဆင်းကာရေငုတ်ကြပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်က ရသေ့များ အအေးဒဏ်မှ သက်သာစေဘို့အတွက် မီးအိုးကင်း ၅၀၀ ကို တန်ခိုးတော်ဖြင့် ဖန်ဆင်းပေးတော် မူလိုက် ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရား က ရသေ့များခွဲလို့မကွဲသော ထင်းတုံး ၅၀၀ ကို တပြိုင်နက် ကွဲစေခြင်း၊
ရသေ့များ မွှေးမရသော မီးကိုတပြိုင်နက်တောက်လောင်စေခြင်း၊
ရသေ့များငြိမ်းမရသော မီး ၅၀၀- ကို တစ်ပြိုင်နက်ငြိမ်းစေခြင်း၊
မီးအိုးကင်း-၅၀၀ ကို တစ်ပြိုင်နက် ဖန်ဆင်းခြင်းစသော တန်ခိုးတော်များ ကို ပြသတော်မူခဲ့ပါတယ်။
တန်ခိုးတော်စုစုပေါင်း ၃၅၁၆ မျိုးကို ပြသ၍ ရသေ့များ ကို ဆွဲဆောင်တော် မူခဲ့ပါတယ်။ ရသေ့များ အားလုံး သူတို့ရဲ့ အသုံး အဆောင်တွေကို မြစ်ထဲမျှောပစ်ကာ မြတ်စွာဘုရားထံ ရဟန်း အဖြစ်တောင်းခံကြပါတယ်။ ပထမ အကြိမ်မှာ ဥရုဝေလ ကဿပ နှင့်တပည့်များ ၊ ဒုတိယ အကြိမ် နဒီ ကဿပ နှင့်တပည့်များ ၊တတိယ အကြိမ် ဂယာ ကဿပနှင့်တပည့်များ သုံးသုတ်ခွဲ ပြီး သာသနာ့ဘောင် ဝင်ရောက်ကြပါတယ်။
ရသေ့တစ်ထောင်လုံး ဧဟိ ဘိက္ခု ရဟန်းများချည်း ဖြစ်လာ ကြပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရား က ရဟန်းတစ်ထောင်ကို ဆင်ဦးကင်းနဲ့သဏ္ဍန်တူတဲ့ ဂယာသီသကျောက်ဖျာပြင်၌ အာဒိတ္တပရိယာယသုတ္တန် ဒေသနာကို ဟောတော်မူလေရာ ရဟန်း အားလုံး အာသဝေါကုန်ခမ်း လို့ ရဟန္တာ အဖြစ်သို့ရောက်တော် မူကြပါတယ်။ ရှင်တစ်ထောင် ကို ချေချွတ်ပြီး ကျွတ်တန်းဝင်စေတဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရား ရဲ့ မေတ္တာတော် ၊ ဂုဏ်တော် အနန္တ နဲ့ စွမ်းပကားကို ခြေစုံဦးခိုက်ကြည်ညိုရပါတယ်..။
ကျွန်မတို့အဖွဲ့လည်း ဟင်္သာတမြို့ နွေသံဃာဒါန ဆွမ်းလောင်း အသင်းကို ကြွရောက်လာကြတဲ့ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ မြတ်သံဃာ တန်းရှည် ကြီး ကိုအားပါးတရဆွမ်းလောင်းလှူ ကြရပါတယ်။ ပြာသိုလပြည့်အမှတ်တရဒါနဟာ ဟာ အားကောင်းတဲ့ သတ္တိတစ်ခုကိန်း ကျန်ရစ်ခဲ့ သလိုပါပဲ။
ဤ သံဃာတော်များ ထဲမှ သာသနာ့အာဇာနည် ရဟန်းမြတ်များ စွာ ထွက်ပေါ်လာ မှာ လည်း ဧကန်ပါပဲ လို့ ထပ်မံဝမ်းမြောက်ရင်း ဇလွန်ပြည်တော်ပြန်ဘုရားကြီး ကိုဖူးမျှော်ရန် ဟင်္သာတမြို့ လေးကို နှုတ်ဆက်လက်ပြ ထွက်ခွာခဲ့ ရပါတော့တယ်။
မှတ်ချက်။ ရှင်တစ်ထောင်အခါတော်နေ့ ကိုမာဂဓီ(သာစည်)ရဲ့ အခါတော်နေ့များ စာအုပ်မှ ကိုးကား ရေးသားရတဲ့အတွက် မာဂဓီ (သာစည် ) အရှင်မြတ်ကို ကျေးဇူးတင် ပါကြောင်း ဦးတင်ဖေါ်ပြအပ်ပါတယ်။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 4:04 PM